उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप एक साता, के के गर्न निषेध छ ? – Nepalilink
उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप एक साता, के के गर्न निषेध छ ?
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको अबधि एक हप्ता थपिएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भदौ १७ गते राती १२ बजेसम्मका लागि उपत्यकाको तीनै जिल्लामा लागू हुने गरी निषेधको आदेश जारी गरिएको जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी एक साताका लागि निषेधको आदेश थप गरिएको जनाएको छ । कार्यालयले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले निषेधको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ ।
यसअघि सोही विषयमा निर्णय गर्न मङ्गलबार तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठक बसेको थियो । बैठकमा जिल्लास्तरीय सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले निषेधाज्ञा एकसाता लम्ब्याउन सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा एकसाताका लागि उक्त आदेश थपिएको हो । यसअघि भदौ ३ गते राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी तीनै जिल्लाका प्रजिअसहितको बैठकले एक साताका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश आज राती १२ बजे सकिँदै छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न निषेधाज्ञाको समय थपिएको हो ।
निषेधाज्ञा जारी भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन् । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको उच्च वृद्धिका कारण जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै उपत्यकासहित नेपालमा झण्डै ५० जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) तथा सरकारको निर्देशन बमोजिम आदेश जारी गरिएको हो ।
कोभिड ­१९ को सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण तथा त्यसको रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा खटिने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएका तर नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अन्य कार्यालयमा आउन र जानुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले न्यूनतम कर्मचारी सङ्ख्या निर्धारण गरी कार्यालयले जारी गरेको फोटोसहितको परिचयपत्रको आधारमा बिहान ९ बजेदेखि १०.३० सम्म र बेलुका ३ बजेदेखि ५.३० सम्म आवागमन गर्न पाउने छन् ।
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अबरोध गर्नेहरु उपर कडा कारवाही गरिने जनाइएको छ ।
उपत्यकामा पानी र औषधिजन्य सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसाय जुनसुकै बेला पनि खुला रहने तर अन्य खाद्यवस्तु, दुध, तरकारी, फलफूलका व्यवसाय भने विहान ९.१५ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ ।